Rose Garden Hotel Yangon - Wedding Fair, March 2019
မတ်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အသိပေးပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ပထမဦးဆုံးပွဲအဖြစ် ကျင်းပမည့် Wedding Fair ကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်သူများနှင့် မင်္ဂလာပွဲအတွက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို Rose Garden Hotel ၌ တစ်နေရာတည်းစုံလင်စွာ ခင်းကျင်းပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပွဲကျင်းပမည့် မတ်လ ၃၀ နှင့် ၃၁ ရက် (၂) ရက် အတွင်း လာရောက်စုံစမ်း ၀ယ်ယူကြသော မင်္ဂလာမောင်နှံများနှင့် ဧည့်သည်များကို အထူးလျှော့ဈေးဖြင့် မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်များကို ရောင်းချပေးမည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး Designer များ၏ လက်ရာများဖြင့် စီစဉ်ထားသော Fashion Show များ၊ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်များလည်း စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
ယခုနှစ်အတွက် ရင်ခုန်စရာ ကံစမ်းမဲများအဖြစ် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် အာရှ၏ ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ရန် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သော နေရာများဖြစ်သည့် ငပလီကမ်းခြေ၌ရှိသော Bay View the Beach Resort ၊ ငွေဆောင်ကမ်းခြေ၌ရှိသော Bay of Bengal Resort နှင့် ကလော၌ရှိသော Kalaw Heritage Hotel တို့တွင် ပျားရည်ဆမ်းခရီးအဖြစ် တည်းခိုခွင့်လက်မှတ်များကို စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
Wedding Fair အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူကြသော မင်္ဂလာမောင်နှံများကို Rose Garden Hotel, Yangon ၏ ၀ါရင့်အတွေ့အကြုံရှိ မင်္ဂလာပွဲဝန်ဆောင်မှု Catering team မှ ဧည့်ပရိသတ်များ၏ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ သင့်လျှော်သော မင်္ဂလာခန်းမများ စီစဉ်ပေးခြင်း ၊ မင်္ဂလာမောင်နှံအတွက် Honeymoon Suit များ စီစဉ်ပေးခြင်း ၊ အထူးလျှော့ဈေးဖြင့် မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်များကို ရောင်းချပေးခြင်းအပြင် အခြားဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော မင်္ဂလာမောင်နှံစီးနင်းရန် အလှဆင်ကားဝန်ဆောင်မှု ၊ ရေခဲရုပ်ထုနှင့် ပန်းအလှဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ ၊ အရသာနှင့် ပြည့်စုံသော International နှင့် Asian Menu များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် Rose Garden Hotel ၏ အစီအစဉ်အသစ်ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ အထင်ကရနေရာများ၌လည်း Catering အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကို မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များကပင် အစဉ်အလာကြီးမားစွာအောင်မြင်မှုရရှိပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် မင်္ဂလာမောင်နှံများ၏ တောင်းဆိုမှုများကြောင့် Rose Garden Hotel Wedding Fair 2019 ကို Myanmar Wedding Talk မှ တာဝန်ယူ ကြီးမှူးကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းရန်၊ Email: info@theroseyangon.com သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် 01-371992 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
As announced duringapress conference held on 5th of March, Rose Garden Hotel Yangon will be hosting “The Very First Wedding Fair in 2019”, bringing together Myanmar’s top wedding professionals and service providers to beaone-stop showcase.
Rose Garden Hotels Inn Gyin Ball Room
Taking place over two days, 30th and 31st of March, the show will not only boast superb discounts and deals, non-stop fashion shows, displaying the latest trends by Myanmar’s top designers, but also lucky draws will be taking place throughout the days.
This year’s top-jackpots are all-inclusive trips to Asias top honey-moon destinations, and weekends at the Bayview Beach Hotel, Ngapali, Bay of Bengal Resort, Ngwe Saung and at the historic Kalaw Heritage Hotel, Kalaw.
Rose Garden Hotel Yangon with its experienced catering team, unique deigned halls of various sizes and honeymoon suites, offers special packages, only valid if booked during the show, and includes complimentary limousine service, Honeymoon Suite Stay, decorations and Ice Carvings, exclusive flower arrangements and it introduces new menus full of delicious International and Asian dishes.
Rose Garden Hotel Yangon also introduces their wedding catering service to exclusive and unique destinations in the wider Yangon area.
After the great success in past years, the Rose Garden Hotel Wedding Fair 2019 is organized again by Myanmar Wedding Talk on an extended area, due to the high demand.
For Further information, Please contact info@theroseeyangon.com or call 01-371992!
Category: Uncategorized March 5, 2019
PreviousPrevious post:Rose Garden Hotel Yangon Thingyan Staycation!NextNext post:6 interesting facts about Californian Wines